Manamafy hatrany ny sekretera jeneralin`ny minisiteran`ny serasera, Guy Laurent Ramanankamonjy, mba samy hanara-dalàna ireo mpifanandrina roa ireo ary hanaja ny lalàna mifehy ny fifidianana. Maro ireo lalàna indraindray adino, toy ny fihantsiana, fanalam-baraka ka tsara mba samy mitandrina ny an-daniny sy ny an-kilany. Nohamafisiny fa misy ny sazy milatsaka amin`ny tsy fitandremana ny lalàm-pifidianana. Ho an`ireo mpikirakira serasera ihany koa dia misy lalàna mifehy ny serasera ary misy fetrany ny zava-drehetra. Manana andraikitra lehibe ny minisiteran`ny serasera amin`ny fiatrehana fifidianana satria nankinin`ny CENI aminy ny fizarana sy fandrindrana ny “temps d`antenne” mba hitovy lenta ireo kandidà, hoy hatrany ny sekretera jeneralin`ny minisiteran`ny serasera.